IZINDABA ZEMPILO YEZEMPILO - Thumela RELAY
WEZOBUCIKO AMACEBISO nezinye CINEMA amadili UKUZIJABULISA UMNOTHO
Amacala ase-South Africa coronavirus ehla kakhulu
Amacala e-coronavirus aseNingizimu Afrika ancipha ngokumangazayo ukutheleleka okusha kwe-coronavirus eNingizimu Afrika kubukeka sengathi kuyehla. Isibalo sokutheleleka okusha ezweni sehle kakhulu - iningi ...
Thola amathiphu wethu wemvelo angama-5 ukugcina omiyane bekude
Thola izeluleko zethu ezi-5 zemvelo ukugcina omiyane bekude kuleli hlobo. Ahhh ehlobo, sonke siyavuma ukuthi lesi ngesinye sezikhathi ezinhle kakhulu zonyaka, akunjalo? Kungamaholide, thina, siphume, sijabulela ilanga, ...
ICameroon: izinsolo zidicilela phansi ukuphathwa kwezimali zeCovid-19
Ngenkathi uNdunankulu waseCameroon uJoseph Dion Ngute esanda ku-oda ukuthi kuphenywe ngokuphathwa kwezimali ezixhumene ne-Covid-19, izinsolo zokuthi lokhu kuziphatha kuyaqhubeka yize yonke into iphazamisa umbono womphakathi odinga ukuphendulwa. Kwa…
Ngabe iVietnam icabangani ngokunqoba kuka-Archbishop Kleda ngokunqoba uCovid-19?
Tchinde Agasti 8, 2020 0
Ukuthula kweVictoria ngesisombululo sezimangaliso zaso kuqala kuphakamisa imibuzo. Umbhishobhi omkhulu waseDouala eCameroon usanda kumemezela esidlangalaleni, ekuqaleni kuka-Agasti 2020, ukuthi unqobile ukubonga kwe-coronavirus ngesisombululo sayo semvelo. U…
nayi imicabango emibi eyi-10 ongayigwema!
Tchinde Agasti 7, 2020 0
"Manje akusona isikhathi esifanele". "Anginawo amakhono". "Kunzima kakhulu kimi". Funda ukuthi usebenza kanjani ngokuzungeza lemicabango enobuthi engavimba amandla akho. Yebo ungakwenza! I-priori inezinwele ezinzima, ikakhulukazi ...
IBill Gates Foundation: "Umuthi wokugomela i-Covid ngeke ube ngaphambi kuka-2021"
Umqambi weMicrosoft ufuna ukubambisana kwamazwe omhlaba ukukhiqiza izigidigidi zemithi yokugoma. Izicashunwa ezivela kwinhlolokhono yethu. Umdlalo weParis. Ngo-2015, ngesikhathi sengqungquthela ye-inthanethi ebingaphezu kwezigidi ezingama-30 kuze kube manje ...
Nawa amathiphu wemvelo wokugcina omiyane bekude
brylandobe Agasti 4, 2020 0
Nawa amathiphu wemvelo wokugcina omiyane bekude Thola izeluleko zethu ezi-5 zemvelo zokugcina omiyane kude kuleli hlobo. Ahhh ehlobo, sonke siyavuma ukuthi lesi ngesinye sezikhathi ezinhle kakhulu zonyaka, cha…
I-XNXX: Iyiphi indlela oyithandayo yokufenda?
Tchinde Agasti 3, 2020 0
Isonto ngalinye, sikumema ukuthi unikeze umbono wakho ngezihloko ezahlukahlukene ngokuphendula ocwaningweni lwethu. Imiphumela izokhishwa ngesonto elilandelayo. Kuleli sonto, sifuna ukwazi ukuthi iyiphi indlela oyithandayo yokudlala ngothando? ...
1 2 3 ... 55 olandelayo